निधिले किन बहिष्कार गरे राष्ट्रपतिको स्वागत ? - Dainik Nepal
निधिले किन बहिष्कार गरे राष्ट्रपतिको स्वागत ?
दैनिक नेपाल २०७४ वैशाख ८ गते २३:१४
काठमाडौँ, ८ वैशाख । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वागत पनि बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित अन्य उपप्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरु बिमानस्थलमा पुगे पनि निधि देखिएनन् ।
स्रोतका अनुसार, वरियतामा असन्तुष्ट भएकै कारण उनी राष्ट्रपतिको स्वागत गर्न एयरपोर्ट नगएका हुन् । भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुक्रबार साँझ स्वदेश आएकी हुन् । उनलाई स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा र कृष्णबहादुर महरालगायत उच्चपदस्थ अधिकारी पुगेका थिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीनबाट फर्कने क्रममा वरियता विवाद एयरपोर्टमा समेत देखिएको थियो । त्यतिबेलासम्म वरियतामा को अगाडि भन्ने प्रष्ट भएको थिएन् । वरियता विवादकै कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत राख्न नसकेर प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका थिए । चीन भ्रमणबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्रीले जब उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई वरियतामा पहिलो नम्बरमा राखे, त्यसपछि गृहमन्त्री निधिले मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।